Ukuphumelela izicelo ze-Android zeeMbasa zoYilo lweeMathiriyeli zika-2018 I-Androidsis
UGoogle ukhetha ezonaapps ziyiliweyo ze-Android ze-2018
Uyilo lwezixhobo lube yenye yeentsika zikaGoogle, ethi ngokuthe ngcembe ihlengahlengise iimveliso zayo ngokusekwe kwimigaqo yoyilo. Kodwa ayisiyiyo kuphela inkampani enokuyenza, kuba abanye abaphuhlisi besicelo se-Android bayayazi indlela yokuyila, njengoko sele sikubonisile kwityeli elidlulileyo.
Kungenxa yoko, inkampani ngoku ihambisa iiMbasa zoYilo lweeMathiriyeli ze2018. Amabhaso afuna ukuqonda ezona zicelo zenzelwe i-Android kulo nyaka. Baye bakwazi ukuhlengahlengisa imigaqo-nkqubo yoYilo lwezixhobo kwizicelo zabo, ukwenza uyilo olungcono lomsebenzisi.
Zizonke izicelo ezikhethiweyo yinkampani yaseMelika ukuphumelela le Mbasa yokuYilwa kweMathiriyeli ka-2018. Siza kuthetha kancinci malunga nelinye nelinye elinikezelwe yinkampani engezantsi. Zeziphi izicelo ezivele njengabaphumeleleyo?
4 Ukucamngca ngesiqhelo
Siqala nge insiza eyaziwa kakhulu kuluhlu, ithandwa kakhulu eUnited States. Yinkqubo efana ne-Uber, evumela abasebenzisi ukuba babelane ngemoto kwindlela ethile. Yonke le nkqubo yenziwa kwi-app ngokwayo. Nangona, umahluko ophambili phakathi komntu okhuphisana naye uyilo, kule meko iphefumlelwe nguYilo lweZinto.
Kwakutsha nje ukuba esi sicelo se-Android silungelelanise uyilo lwaso, ukubheja kwifilosofi yoyilo lwezixhobo. Inoyilo oluncinci, kodwa akukho xesha lilahlile ukuba ngubani uphawu. Yiyo le mali eseleyo eyaziwayo yinkampani indlela yokuxabisa. UGoogle umwonge ngokwazi indlela yokwandisa uyilo lwezixhobo kwezinye iindlela ezintsha.
Umthuthukisi: Imbuyekezo Lyft, Inc.
Enye yezinto ezininzi iresiphi zokusebenza Umgangatho ophezulu esiwufumana kwi-Android namhlanje. Siyabulela kule sicelo sinokufumana iindlela zokupheka ezilula esiya kuba nakho ukupheka kwimihla yethu yemihla ngemihla. Oku kukodwa kulungile, kodwa yindlela eziboniswa ngayo ezi ndlela zokupheka ethe yakwazi ukutsala umdla, kwaye yabenza bafanelwa kukuwongwa.
Xa sifumana iresiphi esifuna ukuyenza, siyifaka. Ngaphakathi iresiphi siza kufumana iifoto zazo zonke izithako ukuba siza kuyidinga, into enokusinceda xa sizithenga, kunye neefoto ngobungakanani obuyimfuneko bemveliso nganye. Ukongeza, kumazwe afana neJamani okanye iUnited States, isinika ithuba lokwenza uluhlu lokuthenga. Umsebenzi ofuna ukuwandisa.
UGoogle unikezele ngesi sicelo ye-Android kuba ivelise isazisi sophawu, sisebenzisa ngaxeshanye umbala, ubuchwephesha, imifanekiso kunye nentshukumo, imigaqo yoYilo lwezixhobo.
Umthuthukisi: KptnCook GmbH
IiPodcasts ziyimfashini ngakumbi kunangaphambili, into uGoogle ayibonileyo, yiyo loo nto esi sicelo singene sabaphumeleleyo kuluhlu. Uninzi lusenokuba luyayazi i-Anchor, ebesithetha ngayo kuwe ngaphambili. Yisicelo esisebenzayo ivumela ukuba senze kwaye sipapashe ipodcast ngokulula kwi-Android.
Esi sicelo sigqamile ekusebenziseni imibala, kuba bekhethe imibala engaqhelekanga kwintengiso. Ukuba sidibanisa iifonti abazisebenzisayo, ezenza inkqubo yokudala ipodcast ilula kakhulu, ayiqhelekanga ukuba iphumelele ibhaso. Ndiyabulela kolu luyilo kulula ukuyisebenzisa.
UGoogle uxabisa ukuba usetyenziso luyilo ukuba isebenza kumaqonga awahlukeneyo, kuba ukongeza kwi-Android, sinokuzikhuphelela kwi-iOS.
I-Anchor-Isicelo sokwenza iipodcast
Las Iinkqubo zokucamngca Baye benza i-niche phakathi kwabasebenzisi be-Android. Kodwa yile nsiza evelele ngaphezu kwezinye. Le app ifuna ukusifundisa ukuba siphumle kwaye sifunde ukucamngca, nto leyo eya kusivumela ukuba silale ngcono okanye sinciphise ixhala. Yayo, sidinga kuphela imizuzu emihlanu ngosuku usebenzisa le app.
Kungenxa yoko le nto uyilo lusisiseko, ukuze sikwazi ukwenza yonke into ngemizuzu emihlanu nje. Kwaye yinto abayifumanayo Uyilo olulula, esivumela ukuba sihambe ngokukhawuleza kuyo, kodwa ngenani elikhulu lemisebenzi ekhoyo. Umdibaniso obaluleke kakhulu, ukugcina ifilosofi yoyilo lwezixhobo kuyo.
UGoogle uyamvuza nge indlela yakhe yokuyila nesebenzayo ukuhamba kuyo.
Indlela elula: Ukucamngca, ukulala
Umthuthukisi: Indlela elula, Inc.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » UGoogle ukhetha ezonaapps ziyiliweyo ze-Android ze-2018
Ungathulisa njani abafowunelwa kwi-Instagram